Ho tonga ny Xiaomi Mi 9 miaraka amin'ny sensor faran'ny sidina haingam-pandeha indrindra | Androidsis
Ho tonga ny Xiaomi Mi 9 miaraka amin'ny sensor faran'izay haingana indrindra amin'ny efijery rehetra
Xiaomi dia vonona ny handefa ny finday avo lenta, ny Mi 9, ao amin'ny andro manaraka, ary, talohan'ny nanoloran'ny orinasa tamin'ny fomba ofisialy ilay fitaovana, Xiaomi sy ireo mpitantana azy dia efa nanamafy ny mampiavaka ny telefaona.
Tamin'ny hetsika farany farany, ny filoham-pirenena Xiaomi Lin Bin dia nanambara fa ny Mi 9 dia ho avy miaraka amina sensor misy ny fantsom-panondro izay ho haingana indrindra amin'ny finday rehetra. Ankoatr'izay, nanampy izany izy ny orinasa dia nisafidy ny andiany fahadimy amin'ny sensor-tanan-tànana an-tsehatra.
Lin Bin no nilaza an'izany dia ho 25 isan-jato haingana kokoa noho ireo sensor amin'ny dian-tànana ankehitriny atolotra amin'ny fitaovana hafa. Ankoatr'izay, nanambara ihany koa izy fa manatsara ny tranga fampiasana manokana toy ny rantsantanana maina sy ny maripana ambany, izay mampitombo ny tahan'ny famohana raha oharina amin'ny vahaolana tamin'ny taranaka teo aloha. (Jereo: Ny Xiaomi Mi 9 Explorer Edition no telefaona matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao)
ihany koa miaraka amin'ny maody alina, izay ahitsiana ny famirapiratan'ny faritra fantatry ny rantsantanana miorina amin'ny tontolo iainana. Ho fanampin'izany, nisafidy ny hampisondrotra ny faritra mamoha ny orinasa sinoa raha oharina amin'ny taranaka teo aloha ary novaina ihany koa ny toerana fametrahana azy.
Vao tsy ela akory izay, Lei Jun, mpanorina sy CEO an'ny Xiaomi, dia nanambara fa ny finday avo lenta avo lenta dia hanana sakany 40 isan-jato kely raha oharina amin'ny teo alohany ary izay ny pikantsary notch an'ny finday avo lenta dia hanolotra tahan'ny 90,7%.
Araka ny andrasana, ny Xiaomi Mi 9 ho avy miaraka amin'ny Fampisehoana AMOLED FullHD + 6.4-inch izay omen'ny Samsung. Izy io koa dia manana gamut loko NTSC lehibe indrindra izay 103.8% ary hatramin'ny 600 nits ny famirapiratana. Misy ihany koa fanamafisana iray taonina ho an'ny scenario fampiasana isan-karazany, toy ny maody alina sy ny lalao. Ho fanampin'izany dia misy "sunscreen" an'ny taranaka faharoa izay manana famokarana loko sy famirapiratana tsara kokoa noho ny hazavana mahery.
Ny tatitra dia manondro izany ny efijery Mi 9 dia arovan'ny Corning Gorila Glass 6 vera ary miaraka amin'ny mari-pahaizana momba ny fiarovana ny maso avy amin'ny Institute of Engineers Electrical. Anisan'izany ny Processor Qualcomm Snapdragon 855, fakan-tsary telo aoriana ary bateria mahazaka 3,500 mAh miaraka amina tohana haingana 27 watt.
Tombantombana izany Ny variant base an'ny Xiaomi Mi 9 dia mitentina manodidina ny 3.000 yuan (390 euro eo ho eo.), raha ny variant ambony kosa dia mety mihoatra ny 4.000 yuan (520 euro eo ho eo.). Raha te hahalala marimarina ny momba azy rehetra dia tsy maintsy miandry ny fandefasana amin'ny fomba ofisialy isika amin'ny herinandro ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ho tonga ny Xiaomi Mi 9 miaraka amin'ny sensor faran'izay haingana indrindra amin'ny efijery rehetra
Teknolojia zoom optika 10X an'ny Oppo hamokatra betsaka manomboka amin'ny tapany faharoa amin'ny taona 2019